I-Luxury Beachfront Six Palms Villas #4. I-Playa Encanto - I-Airbnb
I-Luxury Beachfront Six Palms Villas #4. I-Playa Encanto
Rocky Point, i-Mexico
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Valeriy
U-Valeriy Ungumbungazi ovelele
Ama-villas amasha okwakhiwa ehlobo lika-2020 e-Playa Encanto, amabhishi anesihlabathi angapheli, amanzi angenawo ama-aqua blue rock. Imizuzu eyi-15 kude nezindawo zokudlela, izitolo, imigoqo yedolobha. Izwa ulwandle ngendlela ongakaze uyibone ngaphambili, umkhathi ocashile, ukuphuma nokushona kwelanga okumangalisayo, kanye nemibono emangalisayo yolwandle lwaseCortez. I-Luxury 2,300 SF yekamelo lokulala eli-3 elihle kakhulu, izindlu zokugezela ezi-3 ezivulekile ezinentofontofo engenakuqhathaniswa, amapulani aphansi esimanje avulekile, anokubukwa okungavinjelwe kolwandle. Lokhu kubhuka kukunikeza ukufinyelela ezitezini ezi-2 (imibhede emi-3, obhavu abangu-3). Kunesamba samayunithi angu-4 afanayo atholakalayo, uma ungathanda ukubhukha yonke indawo sicela uxhumane nomsingathi. Six Palms Villas Interior 3D Virtual Tour https://my.matterport.com/show/?m=6jXTvXJTK1t Six Palms Villas Exterior 360 Tour https://app.cloudpano.com/tours/ea3faw6ewv Izinsiza Zangaphandle Zilungiselele ukuzithokozisa kokugcina kanye nokukhululwa kwengcindezi Iphuli Yabantu Abadala - Ukugeza ilanga eduze kwechibi elihlanzekile elingapheli futhi ujabulele umoya ohelezayo wolwandle. I-Kiddie Pool - Izingane zingachaphazeka futhi zizijabulise usuku lonke echibini elijulile elingu-2-3 FT eliphephile. I-Jacuzzi - I-Jacuzzi enkulu yabantu abayi-12 ilungele imibuthano nezindaba ezingapheli. Kuxhunywe endaweni yechibi ithala elikhulu elimboziwe eliphakeme eline-Palapas yolwandle, izambulela, nezihlalo zamagumbi okuphumula ezinikeza ukuphephela elangeni. Indawo yokudlela Yangaphandle - Amatafula amakhulu anama-grill angu-2 e-BBQ kanye neziteshi zokupheka zazo zonke izidingo zakho zokudlela zangaphandle. Izindawo zokugeza zangaphandle. Izinsiza zasendlini Ikhishi elihlome ngokugcwele elinikeza usayizi ogcwele wesitofu/uhhavini, ifriji, ikhofi/imenzi wetiye, i-toaster, i-rice cooker, izingubo zokugqoka kanye nakho konke okudingayo ukuze wanelise umpheki wakho wangaphakathi. Indawo yokuphuzela utshwala ihlanganisa indawo yokubeka iwayini kanye nefriji eyakhelwe isiphuzo. Itafula lokudlela elikhulu labantu abangu-8 ngaphezu kwesiqhingi sasekhishini labantu abangu-4. Igumbi lokuhlala: Indawo yokuhlala evulekile enosofa omkhulu wabantu abangafika kwabayi-10 kanye ne-TV engu-75 inch yokuzijabulisa kwakho. Amakamelo okulala Igumbi lokulala lesivakashi esitezi sokuqala: umbhede ongusayizi wendlovukazi engu-1 Ikamelo lesibili: imibhede engu-2 yobukhulu bendlovukazi Igumbi lokulala eliphakeme lesitezi sesibili: umbhede ongusayizi wenkosi ongu-1, i-TV eyi-intshi engu-75, nendlu yokugezela yangasese. Uyatholakala umbhede we-twine ophathwayo. Ukuxhumeka kwe-inthanethi okuvikeleke ngokugcwele okunesivinini esiphezulu kutholakala kukho konke ukufaneleka. Umshwana wokuzikhipha emthwalweni wesimo sezulu Umgwaqo oholela kule ndawo ungumgwaqo owubhuqu ongafinyeleleka ngemva kwesiphepho semvula enamandla. Uma unokuthile okukukhathazayo ngokufika kule ndawo ngingakunikeza isikweletu esingasetshenziswa ukuphinda ubhukhe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe uma indawo isitholakala. Umnakekeli uzokwamukela izivakashi futhi azihlole. I-Playa Encanto itholakala imizuzu engu-20 ukusuka edolobheni lasePenasco kanye namabhishi anesihlabathi angasese. Ikheli eliqondile nezikhombisi-ndlela kuzonikezwa lapho ubhukha.
I-Luxury 2,300 SF yekamelo lokulala eli-3 elihle kakhulu, izindlu zokugezela ezi-3 ezivulekile ezinentofontofo engenakuqhathaniswa, amapulani aphansi esimanje avulekile, anokubukwa okungavinjelwe kolwandle.
Lokhu kubhuka kukunikeza ukufinyelela ezitezini ezi-2 (imibhede emi-3, obhavu abangu-3). Kunesamba samayunithi angu-4 afanayo atholakalayo, uma ungathanda ukubhukha yonke indawo sicela uxhumane nomsingathi.
Six Palms Villas Interior 3D Virtual Tour
I-Six Palms Villas Exterior 360 Tour
Zilungiselele ukukhululeka kokugcina nokukhululwa kwengcindezi
Iphuli Yabantu Abadala - Ukugeza ilanga eduze kwechibi elihlanzekile le-infinity futhi ujabulele umoya ohelezayo wolwandle.
I-Kiddie Pool - Izingane zingadlala futhi zijabule usuku lonke endaweni yokubhukuda ephephile engu-2-3 FT.
I-Jacuzzi - I-Jacuzzi yabantu abangu-12 elungele imibuthano nezindaba ezingapheli.
Kuxhunywe endaweni yechibi ithala elikhulu elimboziwe eliphakeme eline-Palapas yolwandle, izambulela, nezihlalo zamagumbi okuphumula ezinikeza ukuphephela elangeni.
Indawo yokudlela Yangaphandle - Amatafula amakhulu anama-grill angu-2 e-BBQ kanye neziteshi zokupheka zazo zonke izidingo zakho zokudlela zangaphandle.
Izindawo zokugeza zangaphandle.
Ikhishi elihlome ngokuphelele elinikezela ngesitofu/uhhavini ophelele, ifriji, umenzi wekhofi/wetiye, i-toaster, i-rice cooker, okokugqoka kwedina nakho konke okudingayo ukuze wanelise umpheki wakho wangaphakathi.
Indawo yokuphuzela utshwala ihlanganisa indawo yokubeka iwayini kanye nefriji eyakhelwe isiphuzo.
Itafula lokudlela elikhulu labantu abangu-8 ngaphezu kwesiqhingi sasekhishini labantu abangu-4.
Igumbi lokuhlala: Indawo yokuhlala evulekile enosofa omkhulu wabantu abangafika kwabayi-10 kanye ne-TV engu-75 inch yokuzijabulisa kwakho.
Igumbi lokulala lesivakashi esitezi sokuqala: umbhede ongusayizi wendlovukazi ongu-1
Igumbi lokulala lesibili: imibhede engu-2 yobukhulu bendlovukazi
Igumbi lokulala eliphakeme lesitezi sesibili: umbhede ongusayizi wenkosi ongu-1, i-TV eyi-intshi engama-75, nendlu yokugezela yangasese.
Uyatholakala umbhede we-twine ophathwayo.
Ukuxhumeka kwe-inthanethi okuvikeleke ngokugcwele okunesivinini esiphezulu kutholakala kukho konke ukufaneleka.
Umusho wokuzihlangula wesimo sezulu
Umgwaqo oholela kule ndawo ungumgwaqo owubhuqu ongafinyeleleka ngemva kwemvula enamandla. Uma unokuthile okukukhathazayo ngokufika kule ndawo ngingakunikeza isikweletu esingasetshenziswa ukuphinda ubhukhe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe uma indawo isitholakala.
I-Playa Encanto itholakala imizuzu engu-20 ukusuka edolobheni lasePenasco namabhishi anesihlabathi angasese.
Umnakekeli uzokwamukela izivakashi futhi azingenise.
UValeriy Ungumbungazi ovelele